मृतकको फेसबुक डाटामा पहिलो हक कस्को ? यस्तो आयो अदालतको फैसला | Rajmarga
प्रयोगकर्ताको निधनपछि उसको फेसबुक एकाउन्टमा कसको अधिकार होला ? जर्मनीको सर्वोच्च अदालतले एउटा मुद्दाको फैसाला गरेर यो अन्योल अन्तय गरिदिएको छ।
जर्मन शहर कार्ल्सरुहेमा देशको सर्वोच्च संघीय अदालतले फैसला सुनाउँदै फेसबुक डाटाको अधिकार मृतकको परिवारलाई दिनुपर्ने बताएको हो । अदालतले भनेको छ कि विरासतको अधिकार, डाटा प्राइभेसीभन्दा पहिला आउँछ ।
यो मुद्दा एक जना १५ वर्षीय किशोरको निधनपछि अदालत पुगेको हो । किशोरको मृत्यु सन् २०१२ मा गुडिरहेको ट्रेनसँग ठोक्किएर भएको हो । मृतकका आमाबाबुले फेसबुकसँग छोराको डाटा दिन भनेका थिए । परिवार चाहन्थ्यो कि आफ्नो छोराको मृत्यु कसरी भयो ? कुनै दुर्घटनामा भयो वा आत्महत्या थियो ? मृत्युको सही कारण स्पष्ट नभएका कारण ट्रेन चालकले पनि क्षतिपुर्ति भइरहेका थिएनन् ।
फेसबुकले डाटा र म्यासेज दिन अस्वीकार गरिदियो । त्यसपछि सन् २०१५ मा परिवारले तल्लो अदालतमा निवेदन दियो । तल्लो अदालतले परिवारको पक्षमा फैसला सुनायो । अदालतले भन्यो कि निजी सम्वादको फेसबुक डाटा पनि जर्मनीको विरासतसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत आउँछ । अदालतका अनुसार नाबालिगको मामिलामा अभिभावकलाई आफ्नो सन्तानको कम्युनिकेशन हिस्ट्री थाहा पाउने अधिकार छ।
तल्लो अदालतको फैसलाविरुद्ध फेसबुकले माथिल्लो अदालतको ढोका ढकढकायो । फेसबुकले भन्यो कि कुनै पनि व्यक्तिको डाटा प्राइभेसी उसको मृत्युपछि पनि सुरक्षित रहन्छ । यो जर्मनीको संविधानले दिएको अधिकार हो । अमेरिकी सोशल मिडिया कम्पनीका अनुसार परिवारजनलाई मृतकको फेसबुक प्रोफाइललाई श्रद्धाञ्जली पेजमा परिवर्तन गर्ने वा पूर्णरुपमा हटाउने अधिकार छ। तर डाटा एक्सेसको अधिकार छैन । अपिलमा अदालतले सन् २०१७ मा फेसबुकको हकमा फैसला दियो ।
यसपछि यो कानुनी लडाई सर्वोच्च संघीय अदालतमा पुग्यो । जुलाई २०१८ मा संघीय अदालतलले ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै भन्यो कि फेसबुकले मृतकको परिवारजनलाई डाटा दिनैपर्नेछ । फेसबुक डाटा पनि विरासतसम्बन्धी कानुनको दायरामा आउँछ । अदालतले भन्यो कि जसरी परिवारजनलाई मृतकका पुस्तक र अन्य पत्रहरु प्राप्त गर्ने अधिकार छ, त्यसरी नै डाटाको अधिकार पनि प्राप्त हुनु पर्दछ।
संघीय अदालतको फैसलापछि संवैधानिक अदालतमा अपिल गर्न सकिन्छ । तर फेसबुकका वकिल क्रिस्टियान रोन्केले भने–मलाई लाग्दैन कि अब अरु कुनै अपिल हुनेछ ।
संसारमा करिब २०० करोड फेसबुकका सक्रिय प्रयोगकर्ता छन् । तर यी प्रयोगकर्ता फेसबुकलाई एक रुपैयाँ पनि भुक्तानी गर्दैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्न सक्छ कि फेसबुक कम्पनी चलाउनका लागि पैसा कहाँबाट ल्याउँछ । एजेन्सी
Previous post: गंगामायाले दिइन् अर्को धम्की, दश दिनभित्र माग पूरा नभए पुनः अनसनको चेतावनी
Next post: विश्वकप फुटबलः फाइनलमा फ्रान्स र क्रोएसिया कस्ले बाजी मार्ला ?
देशको हालत ! मृत्यु भइसकेका व्यक्तिले बेपत्ता खोज्ने ?